Burmese President U Thein Sein’s Message To 66th Union Day | NEW BURMA MEDIA
Burmese President U Thein Sein’s Message To 66th Union Day
February 12, 2013 — newburma
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ (၆၆)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ သဝဏ်လွှာ
ချစ်ကြည်လေးစားအပ်ပါသော ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသား သွေးချင်းညီအစ်ကိုများ ခင်ဗျား-
ယနေ့အချိန်အခါသည် ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားတို့၏ ရင်ထဲတွင် ထာဝရ သတိတရ ရှိနေရသည့် နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုနေ့ အချိန်အခါ ဖြစ်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ကျက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် နေ့ထူးနေ့မြတ်တွင် သွေးချင်းညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံး နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပြီး ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာ အဖြာဖြာနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက် နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုများ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် လက်တွဲ၍ အတူတကွ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်ပေသည်။ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်လည်း အားလုံး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။
အတိတ်သမိုင်းတွင် မြန်မာမင်း အဆက်ဆက်တို့သည့် အမိနိုင်ငံတော် တည်မြဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးတို့ကို အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် အတိတ်က မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး သည်လည်း စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ခဲ့သည်ကို တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများ အသိပင် ဖြစ်ပေသည်။
ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဟူသော အမျိုးသားရေး မူဝါဒကို ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားအားလုံး စောင့်ထိန်း ကာကွယ်ရမည် ဖြစ်ပေသည်။
ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့တို့၏ တောင်ပေါ်မြေပြန့် သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့မှုကြောင့် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးစမှစ၍ အမိနိုင်ငံတော်ကြီးအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး နားလည်မှု လွဲမှားကာ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပျက်ပြားခဲ့ရပါသည်။
ချစ်ကြည်လေးစားအပ်ပါသော ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားသွေးချင်း ညီအစ်ကိုများ ခင်ဗျား-
ကိုလိုနီစနစ် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ကျွန်ပညာရေးစနစ် အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတို့အပေါ် မတရား ကုပ်သွေးစုပ်ပြီး စိုးမိုးခြယ်လှယ်မှု၊ မြန်မာ့သယံဇာတ တို့ကို မတရား ရယူသိမ်းပိုက်မှု စသည့် ခါးသီးသော အတွေ့အကြုံတို့ကို မြန်မာတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံး နှစ်ပေါင်းများစွာ ခါးစည်းခံခဲ့ရပါသည်။
မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ပြင်းထန်လှသည့် တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများသည် အတူတကွ လက်တွဲပြီး နယ်ချဲ့ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါသည်။ နယ်ချဲ့တို့ကလည်း မြေပြန့်ဒေသနှင့် တောင်ပေါ်ဒေသတို့ကို ခွဲခြားကာ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားအောင် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သည့် ပညာတတ် မျိုးချစ်လူငယ်တို့က ခေါင်းဆောင်ကာ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ဖက်ဆစ် အကူအညီ ရယူ၍ မြန်မာ့မြေပေါ်မှ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့ကို မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဖက်ဆစ်တို့၏ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းစွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများ အားလုံးက ဖက်ဆစ်တို့ကို မြန်မာ့မြေပေါ်မှ တိုက်ထုတ်ခဲ့ရပြန်ပါသည်။
နယ်ချဲ့တို့က ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြပြီး တောင်ပေါ်ဒေသကို ချန်လှပ်၍ ပြည်မကိုသာ လွတ်လပ်ရေ ပေးလိုသည့်အတွက် အမိန်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ချစ်မြတ်နိုးသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါအဝင် ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို ခေါင်းဆောင်များက ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပင်လုံညီလာခံကို ကျင်းပကာ တိုင်းရင်းသား အားလုံး တညီတညွတ်တည်း လွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုကြမည်ဟု ကတိပြု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုနေ့ကို အစွဲပြု၍ ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပြုလုပ်လာခဲ့ရာ ယခုအခါ (၆၆)နှစ် ပြည့်မြောက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ (၆၆)နှစ်မြောက် ဤနေ့ထူးနေ့မြတ် အချိန်အခါတွင် တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမအချင်းချင်း သွေးစည်းညီညွတ်ရေး၊ အမိမြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကို အထူးအလေးထားပြီး တိုင်းရင်းသားတို့၏ အသည်းနှလုံးထဲတွင် ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်တို့ အစဉ်အမြဲ ကိန်းအောင်းနေဖို့ လိုအပ်လှပေသည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ ဝါဒစွဲ၊ လူမျိုးစွဲတွေကြောင့် ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း သွေးကွဲခဲ့ကြပါသည်။ ပြည်တွင်း၌ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရရှိခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နှေးကွေးခဲ့ရပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် နိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိအောင် တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံးက လက်တွဲပါဝင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို အထူး သတိပြုသင့်ပေသည်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖျက်သမားတို့၏ အန္တရာယ်ကိုလည်း တိုင်းရင်းသား အားလုံးက ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းကာကွယ် တားဆီးဖို့ လိုအပ်လှပေသည်။
ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့၏ သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်မှု၊ ဖိနှိပ်သွေးစုပ်မှု၊ ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ပျက်ပြားမှု စသည့် ခါးသီးသော အတွေ့အကြုံတို့ကို သင်ခန်းစာယူကာ တိုင်းရင်းသား အားလုံးက အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းသာယာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်ပေသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာပြည်အနှံ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတို့ နေထိုင်ရာ ဒေသအသီးသီးတွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အခြေခံကောင်းများ ရရှိအောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် ဒီမိုကရေစီစနစ် ဆက်လက်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများချုပ်ငြိမ်းပြီး ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်မှာ အဓိကလိုအပ်ချက် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် နိုင်ငံသားအားလုံး ပါဝင်လာနိုင်အောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် တိုင်းပြည် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါသည်။ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများ အားလုံးကလည်း ဝိုင်းဝန်းပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
အစိုးရသစ်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်ကြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်အတွက် နိုင်ငံရေးအင်အား၊ စီးပွားရေးအင်အား၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအင်အား တောင့်တင်းရန် လိုအပ်သည်ဟု ခံယူထား ပါသည်။ သို့မှသာ ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို တည်ဆောက် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ရရှိပြီးဖြစ်သည့် အခြေခံကောင်းများကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးတို့တွင် ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားအကောင်အထည် ဖော်လျှက်ရှိသည်ကို တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများ အသိပင် ဖြစ်ပေသည်။
(၆၆)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခါသမယတွင် တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို အချင်းချင်း သွေးစည်း ညီညွတ်စွာဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးကို ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျစွာ တည်ဆောက်ကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
Translation of Message in English
Today is the Union Day, the auspicious red letter day engraved in the hearts of national brethren born in the Union. On this auspicious occasion, I wish all the national brethrenapeace of mind and auspiciousness.
It is the Republic of the Union of Myanmar that was built by all national brethren joining hands each other with unity. We all have made endeavours for the perpetuation of the sovereignty.
In the history of Myanmar, successive Myanmar kings had made efforts for perpetuation of the Union, sovereignty and national solidarity and gave guidance on development of the country. Therefore, it is known to all our brethren that how our country enjoyed development in the past.
All national brethren are obliged to pursue and protect the national policy which calls for non-disintegration of the Union, nondisintegration of the national solidarity and perpetuation of the sovereignty.
The divide-and-rule policy of the colonialists had caused misunderstanding among national brethren, shattering the national unity when the country regained the independence.
The imperialists established the colonial education system in attempts to prolong the colonial rule, exploited the national brethren and national resources, and all national brethren faced bitter experiences for many years.
It was our national brethren who have great patriotic spirit and they, joining hands each other, fought back the colonialists. The imperialists also adopted the divide-and-rule policy, ruling the highlands and the mainland separately to sow discord among the national brethren.
A group of patriotic and educated youths led by General Aung San formed the Myanmar Tatmadaw with the help of fascists and fought and drove the imperialists out of Myanmar’s soil. However, due to barbaric acts of the fascists, all national brethren fought them back.
As the imperialists came in the country again and tried to give the independence only to the mainland, neglecting the highlands, all national brethren led by General Aung San held the Panglong Conference on 12 February, 1947, and signed the Panglong Agreement, claiming the independence unanimously. The day the Panglong Agreement was signed was designated as the Union Day and it turns 66 years today.
On this auspicious occasion, it needs to constantly keep Union spirit and patriotism in the hearts of all national races by placing special emphasis on the unity among national brethren and perpetuation of our motherland and the sovereignty.
After our country regained independence, there had not been cohesiveness among national brethrens due to personal cults, factionalism and racism. Lack of peace and stability in the country had caused the country to lag behind development. It needs to take special notice of the fact that all national brethren should join hands in marching towardsapeaceful, modern, developed country. It also needs to prevent the dangers of destructive elements from home and abroad with Union spirit.
Taking the examples of bitter experience of colonialists’ divide-and-rule, oppression and lack of internal peace and stability, all national brethren are to make collaborative efforts for ensuring eternal peace and development.
The government is laying good foundations for political, economic and social sectors across the country. At present, political stability and the end of armed conflicts is prime importance for flourishing of democracy in the country. Thus, constant efforts are being made for all inclusiveness in the political process.
Priorities are being given to peace and stability, the rule of law and socio-economic development for flourishing of democratic system. In doing so, all national brethren are urged to haveahand in it.
The new government has assumed that the country needs to have greater political, economic and defence strength for its perpetuation. Only then, couldamodern, developed democratic country be built.
All know that already-achieved sound foundations are being improved in regions and states. On this auspicious occasion, all are urged to buildamodern, developed country democratically with the sense of unity.
« “Happy New Year” Greetings From Daw Aung San Suu Kyi
Against on New Press Laws »